ဗီဒီယို> ပုံများ + ပုံပြင်များ Martech Zone
စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 9, 2008 ကြာသပတေးနေ့, အောက်တိုဘာလ 31, 2013 Douglas Karr
လူတွေကစာမဖတ်တတ်ဘူး။ ပြောရခက်တဲ့အရာမဟုတ်လား။ ဘလော့ဂါတစ်ယောက်အနေနဲ့အဲဒါဟာအထူးသဖြင့်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာဖြစ်ပေမယ့်လူတွေဟာစာမဖတ်တတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ဝန်ခံရမှာပါ။ အီးမေးလ်များ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ ဘလော့ဂ်များ၊ စာရွက်စာတမ်းများ၊ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များ၊ အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်ချက်များ၊ လက်ခံမှုဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်များ၊ ဝန်ဆောင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၊ ဘယ်သူမှသူတို့ကိုမဖတ်ဘူး
ငါတို့အလုပ်များနေတယ် - အဖြေကိုရချင်တယ်၊ အချိန်မဖြုန်းချင်ဘူး။ ငါတို့မှာအချိန်မရှိဘူး။
ယခုအပတ်သည်ကျွန်ုပ်အတွက်မာရသွန်ပြိုင်ပွဲရက်သတ္တပတ်အချို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းများရေးသားခြင်း၊ အီးမေးလ်များကိုဖြေဆိုခြင်း၊ တည်ဆောက်သူများအတွက်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများရေးသားခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်နိုင်သည့်အလားအလာများနှင့် ပတ်သက်၍ မျှော်လင့်ခြင်းစသည်တို့ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သို့သော်အများစုကိုတိကျစွာမသုံးစွဲရသေးပါ။ အရောင်းအ ၀ ယ်၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသံသရာနှင့်အကောင်အထည်ဖော်မှုလည်ပတ်မှုအတွက်မည်မျှ ပို၍ အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်ပုံရိပ်များနှင့်ပုံပြင်များကိုသတိပြုမိပါလိမ့်မည်။
ပြည်သူလူထု၏မှတ်ဉာဏ်တွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတံဆိပ်ရိုက်နှိပ်ရန်ရုပ်ပုံများလိုအပ်ကြောင်းထင်ရှားလာသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ရဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည် ဘုံ Craft သူတို့ရဲ့နှင့်အတူဒါအောင်မြင်သောဖြစ်ပါတယ် ဗီဒီယိုများ.
ဒီမနှစ်က၊ နေ့ရောညပါနေခဲ့ရတယ် RFP ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်နှင့်၎င်း၏စွမ်းရည်နှင့်ပတ်သက်။ မေးခွန်းများစွာဖြေကြားဘယ်မှာ။ ကျနော်တို့အသုံးအနှုန်းတွေကိုအပေါ်သွန်းလောင်းကြီးစွာသောကားချပ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရနှင့်ဖုန်းမှတဆင့်နှစ် ဦး စလုံး, ကုမ္ပဏီနှင့်အတူအများအပြားအစည်းအဝေးများရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများခြုံငုံသုံးသပ်သည့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သောစီဒီကိုတောင်ဖြန့်ဝေခဲ့သည်။
လုပ်ငန်းစဉ်အဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နံပါတ် ၂ ကိုပြေးနေသည်။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော်တို့နာရီပေါင်းများစွာကုန်လွန်ခဲ့သောစကားပြောဆိုမှုများ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပစ္စည်းများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးသည်ဖောက်သည်အတွက်တိကျသောပုံရိပ်ကိုမရှင်းနိုင်သေးပါ။ ကျနော်တို့သော့ချက်အင်္ဂါရပ်ရှိခဲ့ပါတယ် သူတို့လိုအပ်သည်။ ကျနော်တို့လုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်စာရွက်စာတမ်းတွေ၊ အစည်းအဝေးတွေ၊ စာတိုပေးပို့ခြင်းစတာတွေအားလုံးမှာအဲဒီသတင်းစကားပျောက်ဆုံးသွားတယ်။
နံပါတ် ၁ နေရာတွင်ရှိသည့်ကုမ္ပဏီသည် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူနှင့်အတူအပြည့်အဝပြသရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ ကျနော်တို့ကိုနောက်မှနောက်ကျတဲ့အချိန်မှာမိတ်ဆက်ပေးပြီးအိမ်တွင်းဆန္ဒပြပွဲကိုမတက်ခဲ့ဘူး။ ကျနော်တို့အပြည့်အဝဆက်သွယ်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းယုံကြည်စိတ်ချခဲ့ကြသည် သူတို့လိုအပ်ဖြေရှင်းချက်.
၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူမှတုံ့ပြန်ချက်မှာကျွန်ုပ်တို့၏ဆန္ဒပြပွဲသည်နည်းပညာအရအလွန်နည်းပါးသောကြောင့်ဖြစ်သည် အသား client ကိုလိုအပ်သောအရာကို၏။ ငါသဘောမတူဘူး - ငါတို့ကုမ္ပဏီရဲ့အရင်ရောင်းချသူနဲ့မအောင်မြင်တဲ့ပြhadနာရှိတာကြောင့်ငါတို့စနစ်၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်များအပေါ်ကျွန်ုပ်တို့၏တင်ဆက်မှုတစ်ခုလုံးကိုကျိန်းသေပစ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လျှောက်လွှာသည်သူ့ဟာသူတည်ရှိနေသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာသည်၎င်းတို့လိုအပ်သောကွဲပြားခြားနားမှုကိုအိမ်သို့ပြန်လိုခဲ့သည်။
နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေ၊ စာရွက်စာတမ်းတွေ၊ ကားချပ်တွေကိုတစ်တန်လျှော့ချပြီးလျှောက်လွှာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်၊ သူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုအတူတကွထားခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဘလော့တွင်ဗီဒီယိုအကြောင်းမကြာမီကရေးသားခဲ့သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသော်လည်းကျွန်ုပ်သည်ယုံကြည်သူတစ် ဦး ဖြစ်လာသည်။
Tags: တိုက်ရိုက်ကဗီဒီယိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗွီဒီယိုများReal-time ကိုဗီဒီယိုအရောင်းရဆုံးyoutube က
Y ထည့်ပါ။ သင်၏ Sidebar တွင်နေထိုင်ပါ။
9:2008 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 7, 24 တွင်
ယနေ့ငါဘတ်စကတ်ဘော၌ Mark အကြောင်းပြောခဲ့သည်၊ ငါသူ့ကိုပထမ ဦး ဆုံးမေးတာက“ မင်းက client နဲ့ဓာတ်ပုံတွေဆွဲခဲ့တာလား? ဖောက်သည်နှင့်တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးမှုတွင်ချိတ်ဆက်မှုများ၊ စနစ်များ၊ အကြောင်းပြချက်များ၊ သုံးစွဲသူများစသည်တို့ကိုသင်တွေ့မြင်ရသည့် Live White board ဆွေးနွေးမှုထက်စီးပွားရေးနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုများကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံ၌ဘာမျှမလုပ်ပါ။ ဘယ်သူမှစာမဖတ်တတ်ဘူးဆိုတာငါသဘောတူတယ် အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တစ်စုံတစ်ခုကိုရေးလျှင်၊ ဝယ်သူနှင့်စကားလုံးအတွက်စာလုံးကိုဖတ်လိုသည်။ သို့မှသာစာရွက်စာတမ်းများတိုတောင်းမည်။
10:2008 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 3, 04 တွင်
မာ့ခ်နှင့်သင်၏စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုသည်ဤ blog post ကိုသေချာပေါက်အားပေးပြီးသင်နှင့်ကျွန်ုပ်သဘောတူသည်။ အချိန်တိုအတွင်းဤအထူးအလားအလာအတွက်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောပစ္စည်းပမာဏကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ရုပ်ပုံများထက် ကျော်လွန်၍ သွားရန်လိုအပ်သည်ဟုထင်ရသည်၊ ဖြစ်နိုင်သည်မှာရုပ်ပုံများ၊ မှတ်တမ်းတင်ထားသောဆန္ဒပြပွဲများနှင့်တိုက်ရိုက်သရုပ်ပြမှုများဖြစ်သည်။
ကျွနု်ပ်တို့ကိုအစကတည်းက - အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗဟုသုတမရှိဘဲထည့်သွင်းထားသည့်အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခု - အားနည်းချက်တစ်ခုအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏အမှတ်တရမှတ်ဥာဏ်နှင့်ပါ ၀ င်သူများအားလုံးကိုစွန့်ခွာခဲ့လျှင်ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်များရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ '' ပိုကောင်းတဲ့စွမ်းရည်။
10:2008 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 12, 22
မင်းရောင်းမရောင်းတာကြားရတာဝမ်းနည်းပါတယ် သင့်ရဲ့ရိုးသားမှုအလွန်တန်ဖိုးထားသည်။ ဒါဟာအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကိုဒုတိယနေရာမှာထားခြင်းဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ် အသံဗွီဒီယိုအပေါ်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုရှိခြင်းဖြင့်ခေါင်းပေါ်မှလက်သည်းကိုထိမိသကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ အရောင်းတင်ဆက်မှုကိုဖောက်သည်များအတွက်ပညာရေးအတွေ့အကြုံဟုသင်ထင်လျှင်လူအမျိုးမျိုးတို့သည်နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးဖြင့်သင်ယူကြောင်းသင်မှတ်မိလိမ့်မည်။ အချို့သူများသည်နားထောင်ခြင်းဖြင့်သင်ယူခြင်းကိုလုပ်ဆောင်သည်၊ အချို့သည်စာဖတ်ခြင်းအားဖြင့်သင်ယူမှုကိုပြုလုပ်သည်၊ အကယ်၍ သင်သည်သင်ယူမှုအတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုးကိုပေးနိုင်ပါကသင်၏ပန်းတိုင်သို့ရောက်ရှိပါလိမ့်မည်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်မတူညီသောစတိုင်များဖြင့်တင်ဆက်မှုမျိုးစုံရှိနိုင်ပြီးတင်ဆက်မှုကာလအတွင်းပရိသတ်ကိုအကဲဖြတ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သူတို့သည်သင့်အား“ ငါပြောမယ်၊ Doug” သို့မဟုတ်“ ဒီမှာဘယ်ကိုရောက်နေပြီဆိုတာငါမသိဘူး” ဟုပြောခြင်းကဲ့သို့သောသဲလွန်စအနည်းငယ်ပေးလျှင်၊ သင်သည်သူတို့၏သင်ယူမှုပုံစံကိုအနည်းငယ်ထိုးထွင်းသိမြင်နိုင်သည်။ ထို့နောက်ထိုလမ်းကြောင်းသို့သွားပါ ။ လာမယ့်တင်ဆက်မှုနှင့်အတူကံကောင်းပါစေ။ နှင့် Commoncraft site ပေါ်တွင်ဘလော့ဂ်များပေါ်တွင်အေးမြနည်းနည်းဗီဒီယိုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ဒါအရမ်းလတ်ဆတ်တယ်! ထို့အပြင်ယခင်မှတ်ချက်မှ backlinks အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ blog တွင်ကျွန်ုပ်၏ဘလော့ဂ်များစာရင်းတွင် no-nofollow ဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ဆိုဒ်တွင်တင်သည်။
10:2008 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 3, 06 တွင်
ပဲနီကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် သင်၏ထင်မြင်ချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သောအလွန်အရေးကြီးသည့်အရာအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်သည် သင်ပေး ဖောက်သည်။ အကယ်၍သာ စာသင်ခန်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ ငါတို့ကပိုကောင်းတဲ့ဆရာဖြစ်ရမယ်။
10:2008 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 4, 29
ဂရိတ် post ကို, Doug ။ ကျွန်ုပ်၏ပြန်ကြားချက်သည်ရှည်လျားလွန်းသဖြင့်မှတ်ချက်တစ်ခုထက် post တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့သည်။
အားကောင်းတဲ့ဗီဒီယို = ဇာတ်လမ်းကောင်း + ကြီးစွာသောကွပ်မျက်မှု
10:2008 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 3, 09 တွင်
မာတင်! ဒီ post ကိုဖတ်တဲ့လူတိုင်းကိုမင်းဆီကို ဦး တည်စေချင်တယ်။
11:2008 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 8, 46
စည်းမျဉ်းနံပါတ် ၁ (သတင်းစာပညာမှ) - သာမာန်လူတစ်ယောက်ဟာ ၆ တန်းကျောင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့စာဖတ်နှုန်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုအတိုင်းအတာရှိသည်။ ဝါကျတိုများနှင့်စကားလုံးငယ်များကိုသုံးပါ။ အရေးကြီးတဲ့သတင်းအချက်အလက်ကအရင်သွားတယ်၊
စည်းမျဉ်း (၂) (စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းမှ) - တစ်နေ့လျှင်လက်ခံနိုင်လောက်သောမက်ဆေ့ခ်ျ ၃၀,၀၀၀ ကျော် (၎င်းသည်ကြော်ငြာရုံထက်မက) ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုနှိမ်နင်းသည်။ ရှုပ်ထွေးမှုများကို ဖြတ်၍ ပါးနပ်သောလူများအတွက်ပင်လျှင်စည်းမျဉ်း ၁ ကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်။
ကောင်းမွန်သော RFP တစ်ခုသည်စာမျက်နှာ ၂ ခုသာဖြစ်ပြီး၊ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူ၏လိုအပ်ချက်ကိုသာဖြေရှင်းလိမ့်မည်။ ကုမ္ပဏီ၏တုန့်ပြန်ချက်၊ သူတို့၏လုပ်ငန်းစဉ်သို့မဟုတ်အကြောင်းအရာများစွာနှင့်ပစ္စည်းများအများကြီးမပါ ၀ င်ပါ။ သင်ပြုလုပ်ပါက၎င်းတို့ကိုအညွှန်းတစ်ခုတွင်ထည့်သွင်းပါ၊ သို့သော်သင်လုံးဝလိုအပ်သောအရာများကိုသာထည့်ပါ။